Madaxweynaha Puntland oo Xarig jaray Guryo loogu talagalay Barkacyaal Duleedka Garowe – SBC
Madaxweynaha Puntland oo Xarig jaray Guryo loogu talagalay Barkacyaal Duleedka Garowe
C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole Madaxweynaha Dowlada Puntland ayaa maanta magaalada Garoowe caasimada Puntland uga qeyb galay xaflad xariga loogaga jarayay guryo loo dhisay qaarkood dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada garoowe.
Xubno ka tirsan goleyaasha wasiirada dowlada Puntland, Maamulka gobolka iyo kan degmada Garoowe iyo weliba saraakiisha laamaha amaanka ayaa ka qeyb galay xafladaas waxaana ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin xarigjarga Guryahan .
Guryaha Xariga laga jaray Maanta laguna talagalay in ay degaan qoysaska barakacayaasha ah waxa ay gaarayaan 600 oo guri oo adeegyadii loobaahnaana leh, waxaana lagu wadaa in ay degaan 600 oo qoys .
Madaxweyne C/raxmaan Faroole ayaa isagu halkaasi ka jeediyay hadal khiimo badan waxaana uu mahad balaaran u celiyay hay’ada world Vishin oo iyadu Howshan qabatay, uguna baaqay dadka barakacayaasha ah ee loo dhisay guryahan in ay sidii loo baahnaa uga faaiideystaan.
Waxa uu taabtay Madaxweynuhu in Lacag badan Soomaaliya loogu deeqo, balse ay badankood ku baxaan waxyaabo aan faaiido laheyn sida in safaro lagu galo, islamarkaana aan faaiido weyn oo waxtar ah laga helin, laakiin ay haboontahay in lacagtaasi la geliyo waxa muuqda oo wax tar u noqonaya dadka iyo dalka siiba guryaha iyo waxbaayaba daruuriga ah sida Nabada iyo horumarinta kale ee dalka.
Xubno kale oo ka tirsan Golaha Wasiirada Puntland sida wasiirka Arimaha gudaha mr Ilka jiir , gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo kan degmada ayaa halkaasi ka jeediyay Hadalo Khiimo badan oo siweyn u raali gelinaya dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan Magaalada garoowe iyo guud ahana gobolka.